किरात समुदायमा मार्चा - ABC KHABAR
Home बिचार किरात समुदायमा मार्चा
मृत्युमा होस या जन्ममा यानेकी सुखमा होस या दुखमा । कुनै शास्त्रमा अनुबन्धित नियम तथा कानुन नभएपनि पहिलेदेखी चलिआएका रिति संस्कारमा अन्य समुदाय जस्तै किरात समुदाय पनि सम्पन्न शाली रहेको छ । परम्परालाई रुढीवाद देख्ने नजरका कारण केही त्यस्ता गम्भिर गलतहरु भने अवश्य भईरहेका छन् । प्रयोगलाई दुरुपयोग गरेकै कारण यसलाई रुढीवाद हो । समाजलाई अनावश्यक हो भन्ने तर्क अगाडि सार्ने गरिएको छ । मर्चाको उत्पादन लाई एकापक्ष यो खत्तम हो भनिरहनु र अर्कोपक्षले यो सबैभन्दा उत्तम हो भनिरहनु भन्दा पनि यो संँग जोडिएका केही वैज्ञानीक कारणहरु सहित तर्क गर्दा सान्दर्भिक हुन जान्छ ।
राज्यले अहिले यसलाई निरुत्साहीत गराउने योजना ल्याएको छ । गाउँगाउँमा उत्पादन हुने घरेलु मदिराको नाम दिएर यसलाई नष्ट गर्ने, पोखाउने काममा राज्य लागेको छ । यो एकदमै निन्दनीय छ । हामी समृद्धीको कुरा गछौंँ । समृद्धीको कुरामा स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहीत गर्ने विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ । यसले कसरी समृद्धी आउँछ । घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर यसलाई विक्रिवितरण गरेर जिविको पार्जन गर्नेहरु नेपालमा निकै छन् । प्रत्येक गाउँमा मदिरा बन्छन । स्थानीय मर्चाको प्रयोबाट बनेको मदिरा प्रत्येक गाउँदेखि शहरहरुमा खपत हुन्छ । तर राज्य यसलाई नियन्त्रण गर्छ । गरिब गाँस खोस्न उद्धत हुन्छ । यसको विकल्पमा यसलाई नियमन गरे हुँदैन । यसलाई आंशिक करको दायरामा ल्याएर उत्पादन गर्न लगाउने । गुणस्तर मापन गर्ने र विक्रि वितरणका नियमहरु बनाएर व्यवस्थित बनाउँदा राज्यलाई के घाटा हुन्छ र ? सबैलाई जानकारी नै छ । हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन जुनसुकै मुलुकमा समेत मदिराको प्रयोग भएकै हुन्छन् । जति ठुला मान्छे भन्नेहरुले समेत यसको उपभोग गरेकै छन् । सभ्रान्त परिवारको किचन या बैठक कोठामा विभिन्न नामधारी रक्सि र जाँड खाने र खुवाउने काम भएकै छन् । ठुला तारे होटल देखी छाप्रे होटल सम्म आयातित र केमिकल युक्त रक्सि बिक्रि वितरण भईरहेको छ । त्यो पनि कानुनीरुपमा वैधता दिइएर नै । मदिरा हानीकारक र बन्द गर्ने हो भने विदेशी ब्राण्डका रक्सि र वाइनहरु किन भित्र्याउन दिने । विक्रि गर्ने लाईसेन्स लिएकै आधारमा विष बेच्न पाइन्छ र ? हुस्की, ब्राण्डी, भोडका, वाइन, वियर आदी जे जस्तो नामका भएपनि त्यसको काम मात्ने नै हो नी हैन र ? हामीले आफ्नै घरमा बनाएको कोदो, मकैको जाँड खाँदा गैरकानुनी हुने विदेशबाट आएको वियर खाँदा कानुनी हुने हुन्छ र ? हामीले हाम्रै आमाले आफ्नै हातबाट बनाएको रक्सि खाँदा अवैध हुने तर विदेशबाट आएको रेडलेवल ब्ल्याक लेबल खाँदा बैध हुने । अझै शान बढ्ने भन्ने पनि कहिँ हुन्छ । आख्यानकार तथा साहित्यकार मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङले भने जस्तै ः रेला गर्नु हुन्छ !
Previous articleपुर्वेली भाकामा ‘माया रानी’
Next articleकवि डि अनुरागीकाे कविता संग्रह विमाेचित